टेलिभिजन शो ‘विस फर अ डे विथ डल्लु’ को पहिलो भाग सार्वजनिक – Complete Nepali News Portal
मंगलबार, ०९ कार्तिक २०७८
टेलिभिजन शो ‘विस फर अ डे विथ डल्लु’ को पहिलो भाग सार्वजनिक
ScotNepal April 6, 2020
चलचित्र ‘बोबी’ बाट अभिनेत्रीको रुपमा डेब्यू गरेकी कविता गुरुङले निर्माण तथा संचालन गरेको टेलिभिजन शो ‘विस फर अ डे विथ डल्लु’ को पहिलो भाग सार्वजनिक गरिएको छ । सामाजिक संजाल यु ट्युब मार्फत सार्वजनिक शोमा एकजना व्यक्तिको एक दिनको इच्छा, आकांक्षा, सपना र खुशीको कथा समेटिएको छ । डल्लु इन्टरटेन्टमेन्टले निर्माण गरेको शो लाई राम कुमार केसीले छायांकन र धुर्वराज पराजुली प्रज्वलितले सम्पादन गरेका छन् । कार्यक्रमको छायाँकन र पोस्ट प्रोडक्सन वेब टिभीमा गरिएको हो ।
अभिनेत्री कविता गुरुङको कन्सेप्ट र प्रस्तुतिकरण रहेको शो डल्लु इन्टरटेन्टमेन्टको अफिसियल च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । उक्त शो को केहि दिन पहिले प्रेस भेटघाट गर्दै ट्रेलर सार्बजनिक गरिएको थियो । ट्रेलरलाइ दर्शकले राम्रो प्रतिक्रिया दिएका थिए । कार्यक्रमलाइ पनि दर्शकले माया गर्नेमा निर्माण टिम बिस्वस्त रहेको छ ।
‘राठी केबल पुर्वाञ्चल लिटिल स्टार-३’ अडिसन
रबिन र बिन्दुको माया लाउनै जानिनमा
महानायकको ल,डाइ कहिले सम्म ? भुवन
हे भगवान, यो कस्तो रोग ?
पल शाह र गायिका समीक्षा ले
अमेरिकामा नेपाली समुदायले आयोजना गरे पहिलो
भान्जी संग ओछ्यानमा भेटिएका मामाको उल्टै
‘राजाको दरबार’ खेम सेन्चुरी र जानुका तामाङ्गको आयो देउसी भैलो...